Estradiol Benzoate tsindrona (Estrogen) - China Ningbo Faharoa hormonina
Estradiol Benzoate tsindrona (Estrogen)
Estradiol Benzoate tsindrona (Estrogen) [Description] entana ity dia hatsatra, mavo rano mangarahara tsara no vokatra. [Andrakitra sy ny fampiasana] Mety hampiroborobo ny fampandrosoana ny faharoa firaisana famantarana sy ny fananganana ny firaisana ara-nofo taova ho an'ny vehivavy biby, hanatsarana ny asan'ny ny Contraction ho an'ny uteruses sy oviducts, hampitombo ny fahatsapana ny uteruses ho oxytocin, sy hampiroborobo ny fialam-boly ny vozon-tranonjaza orifices. Tsy afaka hampiroborobo ny fampandrosoana ny rafi-mammary duct. Amin'ny kely ny progesterone ...
Estradiol Benzoate tsindrona (E strogen )
Ity vokatra dia hatsatra, mavo rano mangarahara tsara no vokatra.
Mety hampiroborobo ny fampandrosoana ny firaisana ara-nofo faharoa famantarana sy ny fananganana ny firaisana ara-nofo ho an'ny vehivavy taova biby, hanatsarana ny asan'ny ny Contraction ho an'ny uteruses sy oviducts, hampitombo ny fahatsapana ny uteruses ho oxytocin, ary ny fialam-boly mampirisika ny vozon-tranonjaza orifices. Tsy afaka hampiroborobo ny fampandrosoana ny rafi-mammary duct. Amin'ny kely ny progesterone, dia mety hanosika vehivavy biby mba hanao firaisana ara-nofo faniriana sy fientanentanana. Izany vokatra be dia ampiharina eo amin'ny foetus nihazona fonontselan'ny, endometritis, ary ny trompes utérine dia mampitohy pyometra aorian'ny fanaterana biby ho an'ny vehivavy. Ihany koa dia azo ampiasaina ho an'ny malemy trompes utérine dia mampitohy hozatra rehefa ampiasaina amin'ny oxytocin cooperatively. Ankoatra izany, dia ampiharina eo amin'ny fampandrosoana dingan'ny mammary fihary ao amin'ny induction ny lactation ho an'ny omby vavy.
1. Cooperatively ampiasaina amin'ny Bevohoka Mare Serum chorionique mba ho famantarana miharihary estrous nandritra ny fampiroboroboana ny estrus: mba hanamorana ny mamantatra ny estrus ary manao famantarana estrous miharihary, rehefa bevohoka Mare Serum chorionique no ampiharina mba hampiroboroboana ny estrus, intramuscular fampidirana 6-8mg ny estradiol benzoate azo ampiharina amin'ny andro faharoa rehefa avy bevohoka Mare Serum chorionique.
2. Hatsarao ny tsy fahazakana ny trompes utérine dia mampitohy hozatry ny oxytocin: Fampiharana ny estrogen eo amin'ny dingan'ny fiterahana ihany no tsy afaka mampirisika ny fanokafana ny vozon-tranonjaza orifices, fa mampitombo ny tsy fahazakana ny trompes utérine dia mampitohy ny oxytocin hozatra. Talohan'ny ny fampidirana ny oxytocin, estradiol benzoate dia nampidirany, ary ny dosing dia toy izao manaraka izao: 3-10 levitra ho an'ny kisoa, 5-20mg ho fiandrasana omby aman'ondry, 10-20mg ny soavaliny, 1-3 levitra ho an'ny ondry, 0.5-2.0mg for alika, ary ny 0.2-0.5mg ho an'ny saka.
3. Fitsaboana ny trompes utérine dia mampitohy aretina: afaka hitsabo endometritis, trompes utérine dia mampitohy inertia (subinvolution ny tranonjaza), ary nohazoniny foetus fonontselan'ny taorian'ny fanaterana, rehefa ampiasaina amin'ny oxytocin cooperatively. Estradiol dia nampidirany aloha (20-30mg ho an'ny be biby fiompy, 10-20mg ny Afovoany-salantsalany biby fiompy, ary 5-10mg ho an'ny biby kely), ary avy eo dia oxytocin ho ampiasaina amin'ny fitsaboana (75-100IU ho fiandrasana omby aman'ondry sy ny soavaly, 30- 50IU ny kisoa sy ny ondry aman'osy, 10-25IU ho an'ny alika sy 5-10IU ho an'ny saka); intramuscular tsindrona na intrauterine tsindrona dia ho ampiharina, indray mandeha isaky ny 7 andro.
4. Mampiroborobo estrus: avo fatrany ny estradiol benzoate azo ampiasaina mba hampandrosoana ny estrus ho an'ny anoestrus pitsaboana biby; na izany aza, ny estrus fotoana io matetika tsy afaka manome mitsangana ny ara-dalàna ny fampandrosoana ny follicle ovulate, fa normalize ny estrus tsingerin'ny. Ny dosing dia toy izao manaraka izao: 10-20mg ho an'ny biby fiompy sy ny soavaly; 5-10mg ho an'ny kisoa; 3-5mg ho an'ny ondry.
1. Avo fatrany, maharitra, na tsy mety mampiasa vokatra ity dia mety hiteraka ovarian kista, ny fanalan-jaza, sy ny firaisana ara-nofo ovarian atrophy fisamborana bisikileta ho an'ny vehivavy biby.
2. Contraindicated amin'ny sakafo biby.
3. ihany no ampiasaina ho an'ny biby fandikana.
4. Tokony tsy ho voakasiky ny ankizy.
28 andro ho fiandrasana omby aman'ondry, ary ny kisoa ondry (vonjy maika); 7 andro ho an'ny ronono (vonjy maika)
Shaded sy airtight; notehirizina ambany ny mari-pana ny 30 ℃.
Previous: Dexamethasone Sodium phosphate tsindrona
Manaraka: Chorionique for tsindrona (GnRH)
Estradiol Benzoate 0.2% tsindrona
Estradiol Benzoate tsindrona Animal
Oestradiol Benzoate tsindrona